किन पलाउँछ महिलाको शरीरमा अनावश्यक रौँ ? - Himali Patrika
किन पलाउँछ महिलाको शरीरमा अनावश्यक रौँ ?
हिमाली पत्रिका २ माघ २०७६, 11:02 am
पुरुषको शरीरमा रौँ र अनुहारमा जुँगा-दाह्री आउनुलाइ स्वाभाविक मानिन्छ। तर, कतिपय महिला हरुको शरीर तथा अनुहारमा समेत रौँ आउने गर्दछ। संसारमा अधिकांस पुरुषको अनुहारमा हल्का दाह्री जुँगा आएकै हुन्छ। तर, अपवादमा कतिपय महिलाहरु अनुहारमा पनि पुरुष सरह दाह्री जुँगा देख्न सकिन्छ। पुरुषमा शरीरमा रौँ आउनुलाइ सामान्य मनियता पनि महिलामा भने यसलाई समस्याका रूपमा हेरिन्छ।
हाम्रो नेपालमा पनि महिलामा अनावश्यक रूपमा दाह्री–जुँगा पलाउनुलाई समाजमा नराम्रो दृष्टिकोणले हेरिन्छ । कतिपय अवस्थामा जिस्क्याएर अपमानित पनि गरिन्छ । तसर्थ, अनावश्यक रौँकै कारण महिलाहरू मानसिक रूपमा पीडित भएको पाइएको छ । हुन पनि दाह्री–जुँगा आउँदा महिलाको सौन्दर्यमा नै असर परिरहेको हुन्छ । जसकारण वेलावेलामा लेजर तथा कस्मेटिक पद्धतिद्वारा रौँ हटाउनुपर्ने झन्झट हुन्छ ।
के कारणले आउँछ रौँ ?
१. महिलामा टेस्टोस्टेरोन हर्मोनको उत्पादन बढी भयो भने शरीरका विभिन्न भागमा पुरुषको जस्तै बाक्ला रौँँ आउँछन् । टेस्टोस्टेरोन हर्मोनलाई पुरुष हर्मोन पनि भनिन्छ । पुरुषमा बढी हुने यो हर्मोन महिलामा पनि केही मात्रामा हुन्छ । महिलामा यसको मात्रा बढ्न गयो भने पुरुषमा जस्तै रौँ पलाउन थाल्छन् । टेस्टोस्टेरोन हर्मोन बढ्दा महिलामा दाह्रीजुँगा आउने, छाती तथा यौ नांगमा धेरै रौँ आउने हुन्छ । त्यसैगरी छाती, पेट, हात, खुट्टा तथा यौ नांगमा समेत अनावश्यक रौँ देखा पर्छ ।
२. पोलिसिस्टिक सिन्ड्रोमका कारण पनि महिलाको शरीरमा पुरुषमा जस्तो रौँ देखा पर्छन् । महिलाका से’क्स हर्मोन एस्ट्रोजिन र प्रोजेस्टेरोनको सन्तुलन गुम्नुलाई पोलिस्टिक सिन्ड्रोम भनिन्छ । यसले महिलाको महिनावारी प्रक्रिया, गर्भधारण लगायतमा त असर पार्छ नै अनावश्यक रौँ पनि उमार्न भूमिका खेल्छ ।